Wasiir Masaga-waa “Dib ayaa loo soo celinayaa ilihii dhaqaalaha ee Galmudug” | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Wasiir Masaga-waa “Dib ayaa loo soo celinayaa ilihii dhaqaalaha ee Galmudug”
Wasiir Masaga-waa “Dib ayaa loo soo celinayaa ilihii dhaqaalaha ee Galmudug”
Wasiirka Warfaafinta Dowlad Goboleedka Galmudug ayaa waxa uu sheegay in uu dib u soo celinayo ilihii dhaqaale ee deegaanada Galmudug, kadib kulan ay yeesheen Golaha Wasiirada maamulkaasi.
Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta maamulka Galmudug Maxamed Aadan Cusmaan (Masaga-waa) oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in la soo nooleynayo, boorkana laga jafayo dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha maamulka Galmudug.
Waxa uu sheegay Abaarahii degaanada Galmudug ku dhuftay in ay saameen ku yeesheen dadka iyo duunyada ku dhaqan degaanada Galmudug, loona baahan dadkii ku barakacay Abaaraha in loo diro adeegyada ay u baahan yihiin.
Maxamed Aadan Cusmaan (Masaga-waa) Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta maamulka Galmudug ayaa sheegay maamulka Galmudug in uu wado dadaalo wax loogu qabanayo shacabka ku dhibaateysan degaanada Galmudug.
Axmed Ducaalle Geelle (Xaaf) oo dhowaan loo doortay Madaxweynaha maamulka Galmudug ayaa waxa uu ka shaqeynayaa sidii deegaanada Galmudug ay ugu talaabsan lahaayeen hormaro iyo sidii shacabka halkaasi degan dib u heshiisiin loogu sameyn lahaa.